Ukunika Amandla Ukuthengisa | Martech Zone
Ubuchwepheshe bokunika amandla okuthengisa, kufaka phakathi amapulatifomu wokuphathwa kobudlelwano bamakhasimende, avumela izinkampani ukuthi ziqoqe, zikhombe futhi zicwaninge amathemba, zizisize zilungiselele umsebenzi ohlobene nokuthengisa futhi zixhumane kahle nangempumelelo nangezinzuzo nezici zazo kwiklayenti.
Izihluthulelo ezi-3 Zokwakha Uhlelo Lokumaketha Oluyimpumelelo
NgoLwesine, Septhemba 9, 2021 NgoLwesine, Septhemba 9, 2021 URebecca Clyde
Izingxoxo ze-AI zingavula umnyango wokuhlangenwe nakho okungcono kwedijithali nokunyuka kokuguqulwa kwamakhasimende. Kepha futhi bangathwebula umuzwa wakho wamakhasimende. Nakhu ukuthi ungayithola kanjani kahle. Abathengi banamuhla balindele ukuthi amabhizinisi ahambise okuhlangenwe nakho komuntu siqu nokufunwayo amahora angama-24 ngosuku, izinsuku eziyisikhombisa ngesonto, izinsuku ezingama-365 zonyaka. Izinkampani kuyo yonke imboni kudingeka zandise indlela yazo yokwenza umsebenzi ukuze zinikeze amakhasimende amandla eziwafunayo nokuguqula ukungena kwabantu abaningi
Amathrendi we-Digital Marketing & Izibikezelo
NgoLwesithathu, Agasti 25, 2021 NgoLwesithathu, Agasti 25, 2021 Douglas Karr
Ukuqapha okwenziwe yizinkampani phakathi nobhadane kuphazamise kakhulu ukuthengwa kwempahla, indlela yokuziphatha yokuthenga abathengi, kanye nemizamo yethu yokumaketha ehambisana nale minyaka embalwa edlule. Ngokubona kwami, ushintsho olukhulu lomthengi nolwebhizinisi lwenzeka ngokuthenga online, ukulethwa kwasekhaya, nezinkokhelo zeselula. Kubathengisi, sibone ushintsho olukhulu ekubuyiselweni kotshalomali kubuchwepheshe bokumaketha kwidijithali. Siyaqhubeka nokwenza okuningi, kuziteshi eziningi nakuma-mediums, sinabasebenzi abancane - abasifunayo
Kungani Ungafanele Uthenge Iwebhusayithi Entsha Futhi
NgoLwesine, July 29, 2021 NgeSonto, Agasti 8, 2021 Douglas Karr
Lokhu kuzoba yisibibithwane. Alipheli isonto ngingenazo izinkampani ezingibuza ukuthi sibiza malini ngewebhusayithi entsha. Umbuzo uqobo uphakamisa ifulegi elibi elibomvu elisho ukuthi kungukuchitha isikhathi kimi ukulandela njengekhasimende. Kungani? Ngoba babheka iwebhusayithi njengephrojekthi ye-static enesiqalo nendawo yokugcina. Akukona… kungumxhumanisi
Inani Lokwakha kuzo Zonke Izinyathelo Zohambo Lwamakhasimende Wakho
NgoMgqibelo, July 17, 2021 NgoMgqibelo, July 17, 2021 UJim Berryhill
Ukuvala ukuthengisa umzuzu omkhulu. Kungaleso sikhathi lapho ungagubha khona wonke umsebenzi osuhambile wokuthola ikhasimende elisha. Kulapho kulethwe khona imizamo yabo bonke abantu bakho kanye namathuluzi wakho weCRM neMarTech. Kuyi-pop-champagne futhi uphefumula isikhashana sokukhululeka. Futhi kuyisiqalo nje. Amaqembu wokumaketha acabanga phambili athatha indlela eqhubekayo yokuphatha uhambo lwamakhasimende. Kepha ukuxazululwa phakathi kwamathuluzi wendabuko kungashiya
Umxhasi Wokuvumela Ukuthengisa